Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Craxmaan Saylici oo Siilaanyo ka wakiil ah Iyo Koox M/weynaha Jabuuti u kireysan Oo Ciise Afhayeen u ah Oo Berri Boorama U Imanaya Sidii Maamulka Saylac iyo Lahaansheheeda Ciise Loogu Wareejin Lahaa Iyo Natiijada laga filayo
Craxmaan Saylici oo Siilaanyo ka wakiil ah Iyo Koox M/weynaha Jabuuti u kireysan Oo Ciise Afhayeen u ah Oo Berri Boorama U Imanaya Sidii Maamulka Saylac iyo Lahaansheheeda Ciise Loogu Wareejin Lahaa Iyo Natiijada laga filayo
Dec 30, 2012 SOMALI NEWS 1
Musharaxa M/weyne xigeenka Kulmiye waa innoo diyaar, ninkaad idinku u garataan ayaa noqon doona. Awdal, Salal iyo Somaliland ba maanta innagaa xukunna, Saylac-na wadanka aan xukunno uunbay ka mid tahay … Craxman Saylici oo la hadlaya waxgaradka Beeshiisa
Waxa maalinta berri Boorama imanaya koox Isku soo baahaysatay sidii Saylac looga wareejin lahaa gacanta Samaroonka oo uu hor kacayo ninkii maanta laga filayay inuu dufaaco danaha dadka gobolada Awdal iyo Salal. Xubnaha imanaya waxa ka la sheegayaa inay ka midyihiin Mujrimka weyn ee Muuse Biixi oo isagu si cad ula saftay beesha Ciise, sheegayna hadii ay SNM yihiin inay Saylac abaal-gud u siinayaan Ciise.
Waxa kale oo ka mid ah Odeyga weyn ee la yiraahdo Cabdi waraabe oo dhawaan mar uu safar ku joogay London shir Taageerayaasha SL lahaayeen kaga khudbadeeyay inayna Beesha Isaaq Boorama ri’ gees kaga ridin, amarkii Boorama lagu galayna ay iyagu ka odayaal ahaan bixiyeen.
Waxa kale oo la sheegayaa in safarka ay ku weheliyaan Wasiiro kasoo jeeda beesha dhexe iyo qaar reer Awdal ah.
Ujeedada Boorama loo imanayo ayaa lagu sheegay sidii Samaroonka loogu qancin lahaa inay Maayernimada(lahaanshaha saylac) u daayaan beesha Ciise oo aan iyadu cod ku helin kursiga, isla markaana aan waxba weydiisan Beesha Samaroon, Laakiin doonaysa In Isaaq uga qaado Gadabuursi, kadibna iyagoon abaal ugu qabin ay taladeeda la wareegaan.
Arintan ayaa haddii ay beesha Ciise u hirgasho noqon doonta taariikh cusb, Saylac-na waxay noqon doontaa meel aan dib dambe Samaroon ugu saqajaamin.
Kooxdan ayaa la shir iman doona kalmada la isku baadho ee la yiraahdo Ergo, Waxay ammaanta u badin doonaan Gadbuursiga oo arimahaa aad uga hela, waxay amaani doonaan xataa intii dhimatay.
Saylicina wuxu odhan doonaa karaamadayda ilaaliya, marka arintu kululaato waa la kala bixi doonaa. Saylici wuxu gaar ula hadli doonaa odayada beeshiisa ah(M.Case) oo uu horkacayo Suldan Ibraahim Samatar oo aan ilaa imika ognahay halka uu ka taaganyahaya qaddiyadda Saylac, kadibna hoos bay u wada fiqi doonaan.
Waxay odhan doonaan
-Talada Saylac Samaroonka kama wada dhexayso ee inagay inaga go’daa.
-Maanta madaxweyne xigeenbaan haysannaa Badhasaabka Awdal-na waa la innoo ballan-qaaday
-Badhasaabka Salal waa la inoo ballan-qaaday
-Xooghaynta Saylac lafteedu miiskay taal, inkastoo iyada samaroonka kale laga dhigayo
-Taliyaha qeybta ee Selel waad ogtihiin inagaa haysanna
-Maayerkuxigeenka Saylac inagaa qaadanayna
-Taliyihii ciidanka xeebta waan haysanaa
Madaxweyne xigeenku waa wiilkeennii, waxa la innooga baahanayahay inaan sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaalinno (sharaftiisa iyo karaamadiisa waxa lagu ilaalinayaa in Saylac la dhaxal wareejiyo).
Nimankan Samaroon arrinkani daacad kama aha, waxay innagu xumaynayaan innaga. Wiilkeenaa uunbay rabaan inay sharafta ka qaadaan, Waxay doonayaan Dawladda iyo innagay inna kala dilaan, waxa la inooga baahanyahay inaan waxbadan ka fikirro. Saylac gacanta laguma qaadayo, maayernimadeeduna meel innagama tegayso, dhawr bilood kadib ninkaan doonno ayaan maayer u dooran karnaa waayo aqlabiyaddiibaan haysanaa (aqlabiyada maanta shaqeyn wayday siday berri u shaqayn doontaa tolow).
– Waad ogtihiin Jabuuti maanta inagaa Ministerkii haysanna, halkan inagaa madaxweynexigeenkii haysanna labada reerba M.casaa maanta isaga dabqaadaya, Soomalidu waxay tiraa ” Nin xariir huwani isma arko” sharaf baan leenahaye sharafta ha innaga qaadina. Shalay Jibriir yoonis inankoodu wax walba wuu sameeyay, khalad iyo saxba way ku dabo socdeen nin ka horyimiday ma jirin. Miyaan ka liidanaa. Halkaa marka la marayo raggii wuu yar wada guuxay waa la soo wada dabcay markaasaa la yir, Maya— kama liidanno.
-Waad ogtihiin Jabuuti reerkeennaa ubadan waxa xilal ka haya, ganacsibaan ku leenahay, arrintani haddii aan ku dheganaano waxbadan baan ku waayaynaa, cadow badan baan yeelanaynaa haddii aan maxedcase nahay.
Ismaaciil saacad saacad buu madaxweynexigeenka ula soo hadlaa, Anigaa(sul.samatar) goob joog u ahaa isagoo Craxmaan la hadlaya Ismaaciil, Ismaaciil wuxu diyaar u yahay inuu mashaariic ka fuliyo saylac iyo lughayaba, dee innaga uunbaa ka faa’iidaysanayna waxa halkaa laga fuliyo.
Madaxweynaha SL-na wuxu naga ballan-qaaday inuu dekaddii Lughaya Dhisayo. Sidaasaa maanta la inoogu majiiranayaa, waxbadan badan baa maayernimo aan macno lahayn inagaga xanibmaya.
Waxa la innooga baahanyaahy inaan kaalinteena odaynimo buuxinno oo aan dadka walaalayno, ciise dhal iyo shasheedbaan nahay (hadda ogow ciisaha ay sheegayaani wuuba quudhsaday oo umaba imane) Arrinkaa Madaxeyne xigeenku innoola socdo ee Ergadu innooga fadhido yeynaan hadal kasoo celin.
Sidaa ma isku raacsannahay HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Inna kiciya aan Ergada u tagnee.
Reer Boorama Iyo Reer Saylac Ha Joojiyaan Taayirada ay gubayaan iyo caagadaha ay tumayaan oo ha qaataan qoriga Jaliyada Nederland (Holand) oo Canbareysay Mamulka Somaliland iyo Faragalinta Djibouti ay ku sameeyeen Golaha Deegaanka Saylac
One thought on “Craxmaan Saylici oo Siilaanyo ka wakiil ah Iyo Koox M/weynaha Jabuuti u kireysan Oo Ciise Afhayeen u ah Oo Berri Boorama U Imanaya Sidii Maamulka Saylac iyo Lahaansheheeda Ciise Loogu Wareejin Lahaa Iyo Natiijada laga filayo”
xa 12/30/2012 at 4:47 am
DICTATORKII DIBIRADA WAYNAA
INUU XUKUNKU DAAIMOO DAARTAAA KU SII HOS JIRUU
DADKAAYGII U DUBANAYAA
DAAIMOW ALOOW DOORAALE MARAY TAHAY
DOORADAASI AN DAHIRAAYN
DIBINDAABYADIISIYO DULMIGAASI UU WADO
DUUDUUBMARUUN DAADKA RAACI !.